Amashidi We Fibbon Wecarbon Colourful China Manufacturers & Suppliers & Factory
Amashidi We Fibbon Wecarbon Colourful - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Amashidi We Fibbon Wecarbon Colourful)
I-Plain matte egcwele i-carbon fiber paneli yemoto ibhodi
I-Hobbycarbon Plain matte ngokugcwele ibhodi yemoto ye-carbon fiber board IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
I-3k ithafa le-carbon elukiwe le-carbon fiber
I-3k ithafa le-carbon elukiwe le-carbon fiber Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya...
Amaphaneli wekhwalithi ephezulu wekhabhoni
Amaphaneli wekhwalithi ephezulu wekhabhoni Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya...
I-Carbon Fibre Weight Reasection Plate
I-Carbon Fibre Weight Reasection Plate Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya we-carbon...
Ukuhanjiswa kwamahhala kwe-Twill glossy surface carbon fiber plate
Ukuhanjiswa kwamahhala kwe-Twill glossy surface carbon fiber plate Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla...
Izingxenye ze-3K zeCarbon Fibheli Zokubumba Izingxenye Zokwelapha
Izingxenye ze-3K zeCarbon Fibheli Zokubumba Izingxenye Zokwelapha Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla...
Iphaneli yamandla amancane we-3k 2mm carbon fiber
Iphaneli yamandla amancane we-3k 2mm carbon fiber Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya...
Izinhlobo Zokubhebhana Ezihlanganisiwe zeCallange Ezihlanganisiwe ze-Aluminium Kits
Izinhlobo Zokubhebhana Ezihlanganisiwe zeCallange Ezihlanganisiwe ze-Aluminium Kits Isingeniso Somkhiqizo I-nati yesikwele e-Welded, i-hex nut ebanzi I-Round nati nge-groove, i-nut eyindilinga enomgodi ohlangothini, i-nut eyindilinga enembobo ekugcineni, i-nut eyindilinga encane I-Round nati, i-ring nati, iphiko...
Izinhlobo ezisezingeni eliphakeme Zokhiye Wentengo Yezinga eliphakeme iNylon Zithungisiwe
Izinhlobo ezisezingeni eliphakeme Zokhiye Wentengo Yezinga eliphakeme iNylon Zithungisiwe Isingeniso Somkhiqizo I-hex flange yokukhiya enensimbi enhle, izinyo lensimbi yonke, i-hex flange yokukhiya engena-metallic, i-hex flange nut enhle Ngaphandle kwe-Aluminium Nut, sinikeza futhi nama-Cnc Router Carbon Fibre...
Amashidi We Fibbon Wecarbon Colourful Amashidi We-Fibbon weCarbon Colourful Amashidi We-Fibbon Carbon owenziwe Ishidi Le-Fibbon yeCarbon Ishidi Le-Fibbon Ye-Carbon Fid Amashidi we-Fibre we-Carbon Fiblic Ishidi le-Fibre ye-Carbon Fure Amapuleti e-Fibbon Carbon adumile